Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : takatr
Entry takatr > takatra
Explanations in Malagasy [Sihanaka] tratra [Rakotosaona 1975]
Explanations in English reached or attained; understood [Hallanger 1973]
Explanations in French atteint par la main, par un instrument, par un projectile: Tsy takatra io voankazo io (On ne peut pas atteindre ce fruit avec la main) ~ Tsy taka-toraka io trano io (On ne peut pas atteindre cette maison avec une pierre)
1 "Tsy takatra tokoa izany," hoy ny olona. [Rabezandrina: Ikotofetsy, page 19]
Quotes Proverbs containing the word takatra
Toponymy Place names having the word takatra (1): Andranotakatra
Explanations in French maigre [Abinal 1888]
Explanations in Malagasy Vorona mitovitovy habe amin' ny vantotr' akoho saingy lava vozona sy lava vava, nefa ny bikan' ny lohany no manaitra avy hatrany fa tazana mandrakariva toa fisaka, nefa ny marina dia ny volony no somary lava eo ankatony sady mitsangan-dava misandrahaka; ny volon' endriky ny tenany rehetra dia manja vasoka [Rajemisa 1985]
Explanations in English the tufted umber (bird) [Hallanger 1973]
Explanations in French oiseau brunâtre, de mauvais augure, qui construit un nid énorme, ombrette; Scorpus umbretta, Gm. [Abinal 1888]
Scientific name Scopus umbretta
Examples Ny papango fangalarina
samy ratsy ka mifanenitra [Fox: Hainteny, number 259]
Quotes Texts mentioning takatra
Proverbs containing the word takatra